जन्मथलोमा मुटु शिविर लिएर पुगे डा. भगवान कोइराला | | Nepali Health
जन्मथलोमा मुटु शिविर लिएर पुगे डा. भगवान कोइराला
२०७३ वैशाख ४ गते १२:२१ मा प्रकाशित
पाल्पा – मनमोहन कार्डियो सेन्टरका शल्यक्रिया विभागका प्रमुख तथा वरिष्ठ मुटुरोग विशेषज्ञ डा. भगवान कोइरालासँग आफ्नो जन्मथलोमा दर्लमडाँडामा मुटुरोग शिविर लिएर पुगेका छन् ।
देशमै नाम चलेका डा. कोइरालासंग गाँउमै उपचार गराउन पाँउदा स्थानीयबासिन्दा खुशी भएका छन् । डा. कोइरालाको नेतृत्वमा २० जनाको चिकित्सक टोली दर्लमडाँडा गाविसस्थित दर्लम उच्च माविमा परिषरमा मुटुरोगको परीक्षण गरेका छन् ।
मुटुको उपचारका लागि सधैँ काठमाडौँ जानुपर्ने जानुपर्ने बाध्यतामा रहेका मुटुरोगीले ग्रामीण क्षेत्रमा नै मुटुसम्बन्धी परीक्षण गराउने मौका पाएकोमा बिरामी निकै खुसी देखिएका हुन । बिरामीलाई शिविरमा स्वास्थ्य परीक्षणका साथै औषधि, इको र एसीजी सुविधाको निःशुल्क व्यवस्था गरिएको छ ।
खानीछाप–१ की मायादेवी अर्यालले पहिलो पटक डा. भगवान कोइरालालाई भेटेर औषधि गर्न पाउँदा आफूलाई आधा रोग नै निको भएको महसुस गरेको बताइन् ।
डा. कोइरालले मुटु तथा अन्य गम्भीर प्रकृतिका नौजना बिरामीलाई निःशुल्क औषधि उपचारका लागि काठमाडौँ रिफर गरेका छन् । बिरामीलाई उपचारका लागि रु एक करोड भन्दा बढी खर्च हुने भए पनि उपचार निशुल्क गर्ने तयारी भएको प्रचार संयोजक भण्डारीले बताए ।
शिविरमा पाल्पा, गुल्मी, अर्घाखाँची, स्याङ्जाका महिला, बालबालिका तथा वृद्ध स्वास्थ्य परीक्षण गराएका छन् । डा कोइरालाले बिरामी तथा महिला, तथा वृद्धलाई सन्तुलित आहारा नियमित रुपमा सेवन गर्नुपर्ने र आराम समेत गर्न सल्लाह दिएका छन् ।
तातो झिरले छेडेर उपचार !
त्रिवि क्रिकेट मैदानमा बयोधा हस्पिटलको मेडिकल टिम